ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » Yappily Ever ပြီးနောက်: သင်က 'Blend မိသားစု' 'အဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား?
အားဖြင့် အမ်း Leave
သင်သည်သူချင်းတစ်ဦးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ချစ်ရာသခင်သည်ချိန်းတွေ့စတင်လိုက်တာဆိုရင်, အကယ်လို့သင်ဟာဘုံတွင်အရေးကြီးသောအရာတစ်ခုခုရှိသည်: တိရစ္ဆာန်များအဘို့သင်၏မေတ္တာ. အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များသင့်မိသားစု၏အစိတ်အပိုင်းများမှာ. သင်ဟာသင်နှင့်သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များတဲ့ package သဘောတူညီချက်ယူဆ; သင့်ရဲ့နေ့စွဲသင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူမရနိုင်ပါက, ဒါကြောင့်တခြားနေရာကိုကြည့်ဖို့အချိန်င်.
သင့်ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအမြဲတမ်းပထမဦးဆုံးလာကြပြီဆိုရင်, သင်သည်သင်၏အသက်ရှင်ခြင်းသို့သစ်တစ်ခုမေတ္တာကိုကြားဆက်ဆံရေးကိုဘယ်လိုပေါင်းစပ်ကြပါ? သင့်ရဲ့နေ့စွဲသင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များတွေ့တော်မူပြီ? ကြင်ဖော်မဲ့မိဘများကဲ့သို့ပင်, တချို့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပိုင်ရှင်များအကြားဆက်ဆံရေးကိုခရီးဦးကြိုပြုခြင်းငှါမိမိတို့မေတ္တာကိုအတိုးနေအိမ်သို့ဆောင်ခဲ့ရှေ့မှာသွားဘယ်လိုကြည့်ဖို့စောင့်ဆိုင်း “ထိုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ။” သင်သည်သင်၏ရက်စွဲသင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေနဲ့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်လမ်းကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါနဲ့? အသစ်ရဲ့မိတ်ဆွေသင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သိရန်ကြိုးစားစေပါသလား? ငါသည်တကြက်တူရွေးခဲ့သူတစ်ဦး၏စကားကိုကြားလျှင်, သူသည်မိမိအငှက်သူတို့ရဲ့သို့မိမိအသစ်ကိုရည်းစားကိုလက်ခံကူညီပေးတဲ့ငှက် behaviorist ထုတ်ရှာကြံကြ၏ “သိုးစုကို။” အဆိုပါအချိန်, ကြိုးပမ်းမှု, နှင့်သူ၏ငှက်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရည်းစားဤမိန်းမသည်သူ့ကိုယုံကြည်စိတ်ချရသောအရာများ၏တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပြီးကိုချစ် “တဦးကို။” သူတို့ကလက်ထပ်, နှင့်ငှက်မွေ့လျော်ခဲ့.
သင့်ရဲ့နေ့စွဲတိရိစ္ဆာန်များနှင့်အတူကြီးမြတ်တလျှောက်တွင်တော့မဟုတ်ပါ, ဒါပေမယ့်ဟောင်းနွမ်းထွက်ခွေးကိုကစားစရာကဲ့သို့သင်တို့ကုသ? ငါသည်အတိရစ္ဆာန်များအဘို့မေတ္တာကိုယေဘုယျအားဖြင့်ချစ်ရန်စွမ်းရည်ကောင်းတစ်ဦးညွှန်ပြချက်ဖြစ်ပါသည်ယုံကြည်ပေမယ့်, တခါတရံတွင်တဦးတည်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ခံစားရနိုင်တယ် “ဒုတိယ-Class” တစ်ဖက်သားရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအား. ဒီနေရာမှာဟန်ချက်ညီဖို့အရေးကြီးဒါဟာင်. တစ်ခါတုန်းကသည်သူ၏ခွေးကိုအပေါ်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောချစ်ခင်မှုနှင့် upscale Delis ရယူထားသောကျွေးသူတစ်ဦးသည်လူကိုသိ, ဒါပေမယ့်နှုတ်အားဖြင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမိမိနေရင်းရည်းစားကိုလွဲမှားစွာ.
သင်သည်အစဉ်အဆက်တစ်ဖက်တစ်ဦးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အကြားတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြ? အဖြေကိုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်ဖို့များသောအားဖြင့်ဖြစ်, နှင့်မိတ်ဖက်သွားကြကုန်အံ့. တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာ, မိတ်ဖက်သင်သည်ထိုကဲ့သို့သောရာဇသံပေးစေခြင်းငှါချီတုံချတုံမယ်လို့မေတ္တာရှင်. (သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်ပြင်းထန်ဓာတ်မတည်သို့မဟုတ်သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၏ရောဂါဗေဒကြောက်ရွံ့သေ​​ာသဘောရှိတယ်ဆိုရင်, ဤပြဿနာများမကြာခဏပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်, နှစ်ဦးစလုံးရဲ့မိတ်ဖက်လိုလိုလားလားရှိကြတယ်ပါ။) မကြာခဏသင်ရွေးချယ်တောင်းဆိုသူတွေကိုဘေးကင်းလုံခြုံမှုမရှိတဲ့ဖြစ်ကြပြီးထိန်းချုပ်ရန်, နှင့်မခံမရပ်နိုင် “ဝေမျှခြင်း” အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အားဖြင့်သင်တို့ကို. သူတို့ကသင့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကြသည်မဟုတ်; သာမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်. ထို့အပြင်, သင်သည်သင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှုတ်ဆက်ပြီးမှပြောခဲ့ပါလျှင်ပင်, သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်ဖွယ်ရှိအခြားအမှုအရာကိုမနာလိုရလိ​​မ့်မည်: မိတ်ဆွေများသို့မဟုတ်မိသားစုနှင့်အတူသင့်ရဲ့အချိန်ကို, သင့်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းများ, ဝါသနာ, ပင်ဖြစ်နိုင်သည်သင်အလုပ်. သင်သည်ထိုကဲ့သို့သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုလုပ်ဖို့တောင်းဆိုရင်ဒါကြောင့်သတိထားဖ​​ို့.
– သင်တိရိစ္ဆာန်များသင်တို့၏နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်မေတ္တာကနေဘေးဖယ်ဆက်ဆံရေးကိုထောက်မဖို့လုံလောက်တဲ့ရှိသည် Do?
– ကိုမည်သို့သင့်ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နှင့်အတူရကြဘူး? သင်၏တစ်ကြောင်ရှိပါသလား, အခြားသောငှက်များ? သင်ထင်ရသောမကိုက်ညီမှုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၏အလားအလာအန္တရာယ်များဖြေရှင်းရန်နိုင်သလား?
– သင်၏နှစ်ခုသင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့် ပတ်သက်. အမြင်အမျိုးမျိုးရှိ Do’ လူနေမှုပုံစံစတဲ့? ဥပမာအားဖြင့်, သူသည်မိမိအကြောင်များအတွင်းမှာနေအိပ်ရာမှာသူနှင့်အတူအိပ်ခြင်းကိုသငျ့ခံစားရပါဘူး, ဒါပေမယ့်သူမကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြောင်ပြင်ပဆိုင်သည်ဟုသူကယုံကြည်? သူမတစ်ဦး, ငှက်ရှိပြီးအခိုင်အမာဆိုပါကအော်ဂဲနစ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်အပြည့်အဝ-spectrum ကိုအလင်းရောင်ရ, သူသည်ဤပိုက်ဆံတစ် overindulgent စွန့်ပစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားဘူး? သူမောင်းသည့်အခါတိုင်းကိုယ်တော်နှင့်အတူသူ့ရဲ့ခွေးကိုယူတတ်မယ်ဆိုရင်, သူမ၏နားအပါး၌ခွေးကိုအသက်ရှု dislike ပါဘူး?
– ဆင်းထိုင်နေနှင့်သင်၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့် ပတ်သက်. တစ်ဦးချင်းစီကတခြားနှင့်နှုတ်ဆက်. ဒါဟာအလွန်အန္တရာယ်ခံစားရနိုင်တယ်, ဒါပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာထက်ရှိရာသို့အလျင်အမြန်ဒီလိုလုပ်ဖို့ပိုကောင်းင်, သင်ဆွေးနွေးမှုအတွင်းသင့်သည့်ရက်စွဲနှင့် ပတ်သက်. အရေးကြီးသောရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်: ဘယ်လိုသူသို့မဟုတ်သူမဖြစ်နိုင်ချေရှိသောစေးကပ်ဘာသာရပ်များနှင့်အတူ copes. အမြင်ကွဲပြားမှုကိုဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းတဲ့ကြာရှည်ခံတဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းတစ်ခုညွှန်ပြချက်ဖြစ်ပါသည်.
သင်သည်နှစ်ခုစလုံးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မိတ်ဆွေတို့ကိုဆိုရင်, သင်ကအစကောင်းမှပယ်ပြီးသားင်. ပွင့်လင်းဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေကိုသိမ်းဆည်းထားပါနှင့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားခံစားဖို့အချိန်ယူ (အတူနှင့်သင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များမပါဘဲ). ထိုလူတန်းစားပေါင်းစုံလမ်းလျှောက်ဖို့အချိန်ကိုယူ, ထိုအနံ့ကို sniff, နှင့်အခေါက်, ညောင်, Squawk, နှင့်သင်တို့၏စိတ်နှလုံးကိုမှ squeak’ content တွေကို!